Galmudug oo taageertay go’aanka xulufada Sacuudiga – XAMAR POST
Galmudug oo taageertay go’aanka xulufada Sacuudiga
Maamulka Galmudug oo ka mid ah maamulada dalka ka jira ayaa taageeray go’aanka xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxayna ka soo horjeesteen dalka Qadar.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha mamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) oo warkan lagu cadeeyay ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay sababta Galmudug ay u taageertay Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta in ay tahay xiriir wanaagsan oo kala dhexeeya.
Wasiirka Warfaafinta maamulka Galmudug Maxamuud Aadan Cusmaan oo la hadlay VOA ayaa sheegay Shirkii Madasha Hoggaanka Qaranka ee lagu qabtay Muqdisho ay ku wargeliyeen in Xukuumadda Soomaaliya aanay mowqif dhex dhexaad ah ka qaadan karin arrimaha Khaliijka, sababo ku aadan xiriirka taariikhiga ah iyo istiraatiijiga ay la leeyihiin Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta.
Sidoo kale Maxamuud Aadan Cusmaan ayaa sheegay Dowladda Soomaaliya inay ugu baaqayaan in ay dib u eegto mowqifkeedii dhex dhexaadka ee ay ka qaadatay xiisada Khaliijka, islamarkaana ay tixgeliso walaaca ay qabaan dowlad goboleedkada.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxay go’aan ka gaartay xiisada Khaliijka 6-dii bishii June ee sanadkan, iyadoo aan la tashanin Dowlad Goboleedyada Soomaaliya.
Maamul goboleedyada Hirshabeelle, Puntland Koonfur Galbeed ayaa horey u taageeray xulufada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxaana maamulka Galmudug uu yahay maamulkii Afaraad, keliya waxaa harsan maamulka Jubbaland, oo aanan la ogeyn go’aanka uu qaadan doono.
Doorka Shirkada Soma Gas iyo Kulamadda Xasan Kheyre ee New York